Booliska oo gacanta ku dhigay nin kufsaday gabar 8 jira, ka dibna dilay | Dhacdo
Home Wararka Maanta Booliska oo gacanta ku dhigay nin kufsaday gabar 8 jira, ka dibna...
Taliska Booliska Soomaaliyeed ayaa xaqiijiyay inay gacanta ku soo dhigeen nin, 21-kii bishan duleedka Magaalada Muqdisho kufsi iyo dilba ugu gaystay gabar sideed jir ahayd.
Sadiiq Aadan Cali (Doodisho), Afhayeenka Ciidanka Booliska Soomaaliyeed oo gelinkii dambe ee Arbacadii shir jaraa’id ku qabtay Magaalada Muqdisho ayaa sheegay in Talaadadii lagu guuleystay in eedeysanaha gacanta lagu soo dhigo.
Afhayeenka ayaa sheegay eedeysanaha oo lagu magacaabo Bashiir Maxamed Qaasim, 25 jir-na ah inuu kufsi iyo dilba u gaystay gabar yar oo 8 sano jira, isla-markaana agoon ahayd.
Afhayeenka ayaa tilmaamay in fal dembiyeedkan uu ka dhacay xero dadka barakacayaasha degan yihiin oo ku taala duleedka Magaalada Muqdisho, gaar ahaan inta u dhaxeyso deegaanada Calamada iyo Xaawo Cabdi.
Waxaa uu intaa ku daray in wada-shaqayn iyo iskaashi ay sameeyeen Maamulka deegaanka Lafoole iyo Saldhigga Booliska ee deegaanka Ceelasha Biyaha, ay horseeday in eedeysanaha oo qiraal ah laga soo qabto deegaanadaaasi.
Afhayeenka Ciidanka Booliska Soomaaliyeed, Sadiiq Aadan Cali (Doodisho) ayaa xusay in iminka eedeysanaha baaritaankiisa lagu dhameystirayo Xarunta Hay’adda Dembi Baarista (CID) ee Magaalada Muqdisho, si kiiskiisa loogu wareejiyo maxkamadda buu yiri awoodda u leh, isla-markaana uu u dhadhamiyo cadaaladda, falkii uu gabadhaasi yar u gaystay.
Doodisho ayaa ugu dambeen sheegay in dembiile kasta oo fal dembiyeed lagu dhibaateynayo qof muwaadin ah ka gaysta gudaha dalka uu mar uun cadaaladda wejihi doono, sidii horeyba u dhacday.
Toddobaadyadii ugu dambeysay ayaa kiisas fara-badan oo kufsi ah waxaa laga soo wariyay inay ka dhaceen xeryaha barakacayaasha ee ku yaala inta u dhaxeyso Muqdisho iyo Afgooye.
Previous articlePuntland iyo Jubbaland oo gudbiyay Xubnaha Guddiga Doorashooyinka
Next articleKenya maku oor kacsan doontaa warbixintii Guddiga xaqiiqo raadinta?